Ogaden News Agency (ONA) – Q2aad ee Dhac-dooyinkii Murugada lahaa ee ka dhacay,Ogaadeenia gaar ahaan Gobalka Jarar – Markaati furkii, Shaanbal Xasan Maxamed Cabdi ( Xasan Aafo)
Wuxuu qaybtii 1aad ( Halkan Riix) ee wareysiga Xassan ku soo bandhigay dhibaatooyin badan oo dadka shacabka loo gaystay intuu ka midka ahaa ciidamada maleesiyaadka gumaysiga Itobiya uu shacabka kula dagaalamo. Isagoo weli sii wada ka sheekeynta dhacdooyinka uu goobjooga u ahaa ayuu yidhi;
Sidaas lagu ma joojin hawl-galkaas ee waxa isna la toogtay Cabdi Carab oo ahaa nin degan is la xaafadaas. Marxuumkan Xaaskiisa ayaa horay Liyu-gu toogasho ugu dileen 2010-kii. Marxuunkan, Cabdi Carab ,waxa uu ifka kaga tagay 12 caruur ah oo aan sidaas da’deedu u waynayn. Is la markaas la dilay Cabdi Carab, waxa isna la dilay gu’doomiyihii Xaafada oo la odhan jiray Cabdi-waal. Waxa kale oo la dilay wiil kale oo la odhan jiray ina-Xasan Qeex oo u yimid tacsida 2-dii oday dhaq-meed ee la dilay. Waxa uuna ka soo galay is la markaas uun magaalada Jig-jiga. Wiil isna daris u ahaa oo la odhan jiray Ina-jaamac Yuusuf ayaa lagu daray xasuuqaas.
Maalin uun ka dib, waxa hawl-gal u baxay Regimentiga 11-aad qaybtiisa 3-aad is la markaasna reer ayaa la badh-til maamadeedsaday. Reerkaas waxa uu yaalay tuulada la dhaho ABSHIR oo dhinaca Koonfur galbeed kaga aadan Gu’na-gado. Reerkaas deganaa ABSHIR, waxa lagaga dilay hawlgalkaa 9 qof. Amarka lagu dilay waxa is ka lahaa, Shi’alaqe Bashiir Af-dheere. 9-kaas qof waxa ka mid ahayd,gabadh yar oo da’deedu ahayd 13 sano jir. Waxa sidoo kale ka mid ahaa nin ku jiray aroos. Intaas waxa dheeraa dhamaan hantidii ay lahaayeen dadkii deganaa Tuulada ABSHIR waa la mooraduugay oo xoolihii ay lahaayeen oo dhan waxa lagu shubay magaalada Gu’na-gado. Adhigu waxa uu dhanaa inta u dhaxaysa 280 -300 oo neef, Lo’duna waxa ay dhanayd 25 ilaa 40. Dhammaan hantidii noocaas ahayd ee Reerahaas la xasuuqay, markii xerada lagu soo xareeyay intii u dhimatay oon&gaajo mooyee, waxa qal-qashay Regimentiga 11-aad.
01 2013, Bulaale, Waxa ka dhacay in ciidanka Liyu Police-ka, regimenti-ga 11-aad ay ku laayeen dad aanan haynin tiradooda gudaha Bulaale.
03 2013, Bulaale waxa ay ku dileen Aabo 4 carruur ah lahaa, ka dib markii ay 4 habeen maxbuus meel ugu haysteen ayaa saacadu marka ay ahayd 7:00 PM cawaysnimo lagu toogtay fadhiisin ay ku lahaayeen Liyu-ga regimentiga 11-aad Tuulada Bulaale.
06 2013, Is la Bulaale, waxa la dilay nin la odhan jiray Indho-ceel markii 3 habeen la haystay .
Kufsi-diido, waa nabad-diido
Ciidankaas Liyu-ga regimentiga 9-aad waxa uu ku kufsaday Bulaale dumar aad u tiro badan. Kuwo la qabay oo carruur lahaa iyo kuwo aan wali la guursan oo gashaantimo ahaa. Waxa ka mid ahaa 3-dan dumarka ah oo aan magacooda hayo waa: F/awliyo, Ina-dhoola-biid, iyo S.X. Br. Liyu- Police markaa waxaa hal’hays u ahaa Galmo diido, waa nabad diido.
S. X. Br. markii ay magacdhabtay ninkii kufsaday ee ciidanka Liyu-ga regimentiga 11-aad ka tirsanaa, waxa loogu han-jabay in la (mal-gayo) dilayo haddii afkeeda mar danbe ka soo baxo hadal sheegaya in la kufsaday. Ciidanka ayaad fadeexadaynayaa ayaa lagu yidhi.
Bishii Luulyo, 2013, ayaa is la Bulaale,waxa lagu toogtay gabadhaa la kufsaday ee kor ku xusan walaalkeed oo la odhan jiray Astur Xasan Bashiir. Sababta loo dilay walaalkeed, wiil kale oo walaalkeed ah oo ku maqan Sacuudiga ayaa la is ku qab-saday waxa uu ku jiraa ama ka mid yahay taageerayaasha ONLF iyo kuma jiro, nasiib daro inta aan la hubin wiilka jooga Sacuudiga in uu yahay waxa lagu sheegi iyo in kale ayaa ba la (is’raa’iilay) la dilay.
03-04 2012, Dhabo-jiriso oo ka tirsan Degmada Birqod waxa is ku meel lagu toogtay 9 qof oo is ku qoys ahaa.
04 2012,Labiga oo Gobalka Dhagax-buur ka tirsan, waxa la dhacay hanti adhi ah oo dhanayd 76 oo ay lehaayeen 6 caruur ah oo ay 2 mataano yihiin. Carruurtan hooyadood horay ayay Liyu-gu u dileen. Markaas caruurtan laga dilay hooyadood 2-da mataanaha ah naaska ayay jaq-siinaysay oo wali ka ma ayna gudhin. Sababta looga dhacay xoolaha, waa maxay?! Waxaa mar-marsiinyo looga dhigtay in wiil la dhashay caruurtan hooyadood markii la dilay uu ku biiray Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogaadenia. Waxa ay dajisteen Cabdi Ilay iyo kuwa uga hooseeya xukunka in la dhaco hantida guurtada ama ma guurtada ah ee uu leeyahay Reerka uu kaga jiro 1 qof haba ugu yaraatee oo ka tirsan dagaal yahanada ONLF.
03-04 2012, Is la Labiga oo ka tirsan Gobalka Dh/buur, waxa kale oo dhacday in Reer Yuusuf Dhuxul ay Ciiidanka Liyu-gu ka dhaceen 90 adhi ah, 23 lo’ ah, iyo 36 geel irmaan ah. Nasiib wanaag, geelii wuu u bad-baaday oo Xerada ayuu ka fakaday, haseyeeshee, adhi’gii iyo lo’dii dhamaantood say-lada Xoolaha Dh/buur ayaa lagu xaraashay.
03-04 2012, Is la Labiga oo ka tirsan Gobalka Dh/buur, Ciidanka Liyu-ga ee fadhiisinkoodu yahay Gosola-leey oo gobalka Dh/buur ka tirsan ayaa hawl-gal ciidan ku soo xidh-xidhay dad shacab ah oo tiradoodu dhan tahay ilaa 24 qof. Dadkan jidh dil aad u daran ayaa loogu soo gaystay inta la soo waday. Waxa luquntooda ka muuqday raad-ka xadhig lagu dabay si ay wax u sheegaan oo xog dheeri ah looga helo. Marka ay soo gaadheen Labiga, baco ayaa madaxa loo wada galiyay si ay u neef qabatoobaan oo ay u sheegaan warar dheeri ah, haddi ay ba ay jiraan. Gabdhahana waa la qaawiyay mid walba iyada oo looga danleeyahay in laka la saaro in ay ONLF qabto iyo in kale. Gabdhaha qaar ayaa aniga oo ah, Shaanbal Xasan Maxamed Cabdi (Xasan Aafo) ii sheegay in la kuf-saday intii la soo waday. Gabdhaha qaar markii laga dan dhamaystay waa la iska sii daayay. Halka qaarkii kalena la a hadhay. Taliyaha Ciidankan watay waxa uu ahaa Shi’alaqe Farxiye.
Shi’alaqe Farxiye waxa uu la hadhay, gabadhii ugu wada qurux-da badnayd gabdhaha isaga oo guur qasab ah ku xalaashaday gabadhaas. 6 bilood marka uu haystay ayay fursad heshay ay kaga baxsato gabadhaas, Ina Yuusuf Maxamed Cali (Yuusuf-goodaad) ahayd.
06 2012, Caga-sur/Geedi-soor oo ka tirsan gobalka Dh/buur waxa lagu dilay nin shacab ah, waxaana dilay Ciidanka fadhigoodu yahay Awaare oo uu madax ka yahay Shi’alaqe Axmed Shuun. Maxay tahay sababta ka danbaysa dilka ninkaas shacabka ah?! Hooyadii oo ahayd wadaad/islaan cimri’day oo da’ ah isla markaasna hadalku is kaga darsamay (asaa’sac) ayaa waxa u yimid Liyu-ga oo isaga soo dhigay Ciidan ONLF ah. Waxa ay ku tidhi, wiilkayga ayaa ONLF ah ee ordaya oo u taga oo waraysta!
Juun 2012, Wado-abaareed, Waxa lagu dilay wiil dhalin yar ah oo da’diisu ahayd ilaa 28 sano jir. Wiilkaas ayaa goor ay habeen tahay u haasaawo tagay gabdho, isla soo laabadkii uu soo laabtay, waxa lagu qabtay kadinka aqalkooda oo halkaas ayaa lagu marjiyay.
2-dii bisha Luulyo, 2012, Galool-goose oo ka tirsan Santarka Bukudhabo, waxa lagu dilay wiil jiifay gurigiisa. Waa maxay sababta loo dilay wiilkan?! Waxa dagaal ku dhax-maray ONLF iyo maleeshiyu Liyu ah meel aan sidaas uga fogayn Galool-goose ,waxa lagu qaniinay waa in ay ONLF soo ag mareen gurigiisa isaga oo hurda.
5-tii Luulyo, 2013, Awaare oo ka tirsan Gobalka Dh/buur waxa lagu xidhay 4 qof. Waxa ay magacyadoodu ka la yihiin 4-tan qof : Deeq Badal, Cali Gotaale,Naasir Sh. Xirsi, Maxamed Aw. Muxumed Haybe. Waa maxay sababta loo xidhay wiilashan?! Waxa ay is ka diideen in qasab lagu ciidameeyo oo ay noq-daan Maleeshiyaadka Tuulo joogta ah. Waxa ay ku jireen wiilashaas Koonteenar markii iigu dambaysay.